रिक्त शिक्षकको विवरण पठाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अटेरी |
प्रकाशित मिति :2017-07-12 10:18:44
यस्तै, शिक्षक विज्ञापनको पाठ्यक्रम, प्रश्न ग्रिड र परीक्षालगायतका विषयमा सुधार गर्न थप गृहकार्य गर्ने पनि सहमति भएको थियो।
यी हुन सबैभन्दा महंगा स्कूलहरु, भर्ना मै लाखाै असुल्छन
बसको ठक्करबाट बालिकाको मृत्यु, यातायात ठप्प
विद्यार्थी भर्नाको नतिजा सार्वजनिक, १२ सय विद्यार्थीको नाम
किन हुन्छ उल्का वर्षा ?
हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा निजी विद्यालयहरुले लिने शुल्कको विषयलाई लिएर विवाद निस्कन्छ । हरेक
काठमाडौं/बैशाख ९– बर्दियाको राजापुर क्षेत्रमा बसको ठक्करबाट बालिकाको मृत्यु भएपछि यातायात ठप्प भएको छ ।
पृथ्वी दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदै
विद्यालय बन्द हुँदा ८ हजार विद्यार्थीको भर्ना रोकियो
छात्रवृत्ति नपाउँदा भरणपोषणमा समस्या
मलाई किन चाहियो इक्यान ?
इक्यानमा सदस्यलार्इ‘समान पहुँच’ र ‘समान अवसर’ सिर्जना गर्छु –प्याकुरेल
इक्यान सब–एजेन्टको संघ भयो, यसलाई एजेन्टहरुको संघ बनाउँछु
इक्यान निर्वाचनमा British Council र IDP वकालत ?
इक्यानलार्इ अार्थिक रूपमा अझ बलियाे र पारदर्शी बनाउँछु
इक्यानलार्इ थप गर्विलाे बनाउँदै प्रविधी, व्यवसायी र विद्यार्थीमैत्री बनाउँ छु